Doorashadii Madaxweynenimo ee Tuniisiya: markii arrimaha Karoui ay dib u soo nooleyso cabsidii laga qabay kala-baxa siyaasadeed - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Doorashada madaxtinimada ee Tuniisiya: markii arrimaha Karoui ay dib u soo nooleyso cabsidii laga qabay kala-baxa siyaasadeed - JeuneAfrique.com
Doorashada madaxtinimada ee Tuniisiya: markii arrimaha Karoui ay dib u soo nooleyso cabsidii laga qabay kala-baxa siyaasadeed - JeuneAfrique.com
Xadhiga musharraxa madaxweynaha ee Nabil Karoui ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in xisaabaadka la dejiyo ama xitaa soo noqoshada rabshadaha siyaasadeed ee ka socda Tunisiya. Haddii xisbiyadu ugu baaqaan in la jahwareero nolosha siyaasadeed, dadaallada dowladda ee tan aan wali guuleysan ma aysan gaarin.
Markii ugu horreysay ee taxaddar leh, jahwareerka welwelku wuxuu ku sii badanayaa waddooyinka waddooyinka Tunisiya. Muddo bilo ah, xubnaha fasalka siyaasadeed waxay filayaan dejinta xisaabaadka doorashooyinka. Laakiin dhammaantood dharbaaxo ayaa loo oggol yahay? Xiritaanka murashaxa maxkamadda sare ee maxkamadda Nabil Karoui, Agoosto 23Wax yar uun ka hor bilowga ololaha, waxaa sii kordhaya cabsida iyo sii hurinta shakiga.
Kuwo badan ayaa tilmaamaya mas'uuliyadda tooska ah ama tooska ah ee fulinta ee go'aankan maxkamadda. Youssef Chahed, madaxa dowladda (oo markii dambe u wakiishay howlihiisa si uu u diyaariyo ololihiisa madaxweynaha), si adag u difaac.
Xeerka anshaxa siyaasadeed ee shaki ku jiro
Miyaanay ahayn tan ugu dambaysay bishii Abriil ee la soo dhaafay, oo ahayd banner of jaartarka anshaxa siyaasadeed ee la moodayay inay dejiso xeerarka anshaxa wanaagsan? Maxamed Fadhel Mahfoudh, wasiirka u xilsaaran xiriirka hay’adaha dastuuriga ah, bulshada rayidka ah iyo xuquuqda aadanaha, ayaa loo xilsaaray oo wuxuu bilaabay la tashiyo uu la yeelanayo bulshada rayidka ah, saxaafadda, hay’adaha madaxa bannaan iyo xisbiyada. Hadafka: in la ilaaliyo guulihii dimuquraadiyadda.
Dib-u-dhacyadu waxay u sabab noqon doonaan caqabado xagga sahayda ah oo ku saabsan abaabulka waaxda la-talinta koowaad ee waaxda
Laakiin horumarintiisu, oo la rajaynayay in la dhammaystiro ka hor dhamaadka bisha Luulyo, lama dhammaystirin. Ilaa iyo markaas, wasiirku wuxuu is casilay si uu ugu ololeeyo doorashooyinka sharci dajinta. Faylka waxaa loo xilsaaray Agaasimaha Guud ee Xuquuqda Aadanaha, kaasoo aan dooneynin inuu dabagal ku sameeyo Dhallinyarada Afrika. Maxamed Fadhel Mahfoudh, ayaa dhiniciisa, wuxuu dammaanad qaadayaa in howsha ay socoto, iyo in adeegyadiisii ​​hore ay xaqiijinayaan mabda'a sii wadista Gobolka. Waxa kale oo uu aaminay faylka ka hor bixitaankiisa wada-shaqaynta Machadka Xuquuqda Aadanaha ee Carbeed si "loo dammaanad qaado dhexdhexaadnimada hindisaha isla markaana laga ilaaliyo waxyaabaha liita". Xusuus-qorka nolosha siyaasadeed waa inuu xitaa arkaa iftiinka maalinta.
Sida laga soo xigtay isaga, dib-u-dhaca ayaa sababi kara caqabado dhanka logistikada ah oo ku saabsan abaabulka wada-tashiyada waaxyada koowaad, iyo rabitaanka ah in laga bilaabo heerka gobolka, halkaasoo bulshada rayidka ah ay haysato dhibaatooyinkeeda. Wasiirkii hore wuxuu rajeynayaa in howshu ay guuleysan doonto.
"Dhowr bilood ka hor, waxaan ogaanay in aflagaadada hadalka ahi ay bilaabeen inay xukunka ku dhigaan muuqaalka siyaasadeed iyo warbaahinta, mana doonayno ifafaalahan inuu horseedo xaalado xunxun xagga ku dhaqanka xuquuqda iyo xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Waxay ka hadlaysaa ka hortagida xasuuqa, "ayuu noo sheegay.
Dad badan oo reer Tuuniisiya ah ayaa maanka ku haya rabshadaha siyaasadeed ee asteeyey sanadka 2013. Ku xigeenada Chokri Belaïd iyo Mohamed Brahmi si kale ayaa si qabow loogu diley bartamaha wadada. Furitaanka internet-ka waxaa sidoo kale weheliyey drif, oo inta badan bartilmaameedsada siyaasiyiinta, kuwaas oo si joogto ah u dhalleeceeya cayda iyo hanjabaadaha.
Waxaa soo wajahay shakiga dhowaan soo kordha, Awoodda Sare ee Madax-bannaan ee Doorashooyinka (ISIE) Waxay, dhanka kale, ka digtay isticmaalka wararka xasaasiga ah, macluumaad khaldan iyo dacaayad in marin habaabin kara codeeyayaasha.
"Olole fadeexad ah"
Iyaga oo ka baqaya halista siifashada, xisbiyada ayaa sidoo kale qabsaday mowduuca. Isagoo tirtiraya "xad-dhaaf", Machrou Tounes wuxuu ugu yeeray agaasimayaasha ololaha ee musharraxiinta madaxweynaha inay kulmaan si ay uga heshiiyaan xeerka anshaxa. ololuhu wuxuu bilaabmay 2 Sebtember taasina waxay ku dhamaan doontaa 13.
Qof kastaa wuu oggol yahay inuu sare u qaado doodda oo uu diiradda saaro arrimaha la taaban karo, laakiin cidina kama jawaabin wicitaankeena
Slim Tlatli, agaasimaha ololaha Mohsen Marzouk, oo dhaleeceeyay "olole fadeexad ah" , weerarada dadka kaliya u adeega si ay u quudiyaan wararka xanta ah iyo xanta lama huraanka ah ". Isaga, macnaha guud ma aha oo kaliya inuu ka baqo isbeddellada rabshadaha wata, laakiin wuxuu kaloo kordhiyaa aaminaadda muwaadiniinta ee siyaasadda. Si kastaba ha noqotee, u soo bixida codbixiyeyaasha ayaa noqon doonta mid ka mid ah qodobbada waaweyn ee codbixinta soo socota.
Khilaafka ololaha horraantiisii ​​ayaa shiday cabsi: wareysiga, oo laga sii daayay Sebtember 4 ee El Hiwar Ettounsi, musharrax Slim Riahi, kaasoo dhalleeceeyay caddaalad ka dhan ah isaga iyo Nabil Karoui - oo lagu ganaaxay 50 000 dinars (14 800 euro) "xayeysiin iyo dacaayad faa'iido u leh murashax." Munaasabadan, Ururka Garsoorayaasha Tuuniisiya wuxuu ka codsaday Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud iyo sidoo kale Golaha Sare ee Magistracy inay baaraan eedeymahan.
Waa tan booska MRC Maurice Kamto